Nzvimbo Yekutarisisa / Midziyo | Ota Citizen's Plaza
Kamuri yekudzidzira, auto tenesi, tafura tenisi>
Iwe unogona nyore kudikitira kubvisa kushomeka kwekurovedza muviri uye kuumbika kumusoro.
Zvemotokari tenisi uye tafura tenesi, jimunasimu inozopatsanurwa kuita mbiri pazuva rakatarwa revhiki, uye muchina wetennis netafura yetenisi tafura ichaiswa kuitira kuti iwe ugone kudzidzira tenisi uye tafura tenesi.
Chitatu chega chega, nekuti inzvimbo yekudzivirira hutachiona hutachiona hutsva, kusvika kumagumo ebhizinesi rekudziviriraAuto tenesi / tafura tenesiHaisipo. (Inowanikwa muvhuro wega wega neChishanu.
Anenge 105.9 mativi emamita
Auto tenesi: 1 munhu pamushini (haigone kutsiviwa pakati)
Tafura tenesi ・ ・ ・ Kusvikira kuvanhu vana pachikamu
Aerobic kurovedza muviri / cardiopulmonary kutsungirira
Chitsitsinho: Labode LXE
Yekumhanyisa muchina: Labode LXS
Dzidzisa chipfuva chako chese: FUNASIS Chest Press
Dzidzisa pamberi pebhokisi: FUNASIS kubhururuka
Dzidzisa mapfudzi ako: FUNASIS lat dhonza-pasi
Dzidzisa maoko maviri (kunyanya epamusoro muviri): FUNASIS yakawanda-pulley
Dzidzisa musana wako: FUNASIS back extension
Dzidzisa dumbu rako: FUNASIS Crunch
Dzidzisa mapfumo ako: FUNASIS Rotary Toso & Twist
Dzidzisa muviri wako wepasi: FUNASIS Gumbo Press & Mhuru Simudza
Dzidzisa kumberi kwerutivi gumbo: FUNASIS gumbo rekuwedzera
Dzidzisa kumashure kwemakumbo: FUNASIS akagara gumbo rakakombama
Dzidzisa mukati nekunze kwehudyu dzako: FUNASIS Kuwedzera & Kubvuta
Papfudzi uye kumashure: Kugadziriswa kweMuviri II Bhegi Rekubatanidza
Wepamusoro muviri: Kugadziridza Muviri II Low Link
Mari yekushandisa yezvivakwa uye inowoneka michina yekushandisa mashandisirwo ◆ Ndokumbirawo uregerere kuchinjana.
Kamwe (hapana muganho wenguva) 330
Maminitsi makumi matatu nguva imwe neimwe 330
1 nguva pamotokari paawa 330
Kubva 9: ​​00 kusvika 22: 00 zuva rega rega.
* Chikumbiro chekushandisa chiri kusvika 21:00
* Mushandisi unoshandiswa kusvika 21:45
Auto tenesi (3 zvikamu)
Muvhuro/水 曜 日(Chikamu 1 kusvika 6)
Chishanu (Chikamu 1-22)
* Chitatu chega chega, nzvimbo inobaiwa jekiseni rekudzivirira hutachiona hutsva, saka haigone kushandiswa kusvika panopera bhizinesi rekudzivirira.
Tafura bhora (zvikamu zvishanu)
Muvhuro/水 曜 日(Chikamu 1 kusvika 3)
Chishanu (Chikamu 1-11)
Auto tenesi nguva
1 9:00 kusvika 9:30
2 9:30 kusvika 10:00
3 10:00 kusvika 10:30
4 10:30 kusvika 11:00
5 11:00 kusvika 11:30
6 11:30 kusvika 12:00
7 12:30 kusvika 13:00
8 13:00 kusvika 13:30
9 13:30 kusvika 14:00
10 14:00 kusvika 14:30
11 14:30 kusvika 15:00
12 15:00 kusvika 15:30
13 15:30 kusvika 16:00
14 16:00 kusvika 16:30
15 16:30 kusvika 17:00
16 18:00 kusvika 18:30
17 18:30 kusvika 19:00
18 19:00 kusvika 19:30
19 19:30 kusvika 20:00
20 20:00 kusvika 20:30
21 20:30 kusvika 21:00
22 21:00 kusvika 21:30
Tafura tenisi nguva
1 9:00 kusvika 10:00
2 10:00 kusvika 11:00
3 11:00 kusvika 12:00
4 12:00 kusvika 13:00
5 13:00 kusvika 14:00
6 14:00 kusvika 15:00
7 15:00 kusvika 16:00
8 16:00 kusvika 17:00
9 18:00 kusvika 19:00
10 19:00 kusvika 20:00
11 20:00 kusvika 21:00
Ndokumbira utenge tikiti kumutikiti wekutengesa tikiti pazuva rekushandisa uye shandisa zvakananga.
Tichatanga kugamuchira auto tenesi uye tafura tenisi maminetsi makumi matatu pamberi pechikamu chimwe nechimwe (maminitsi gumi pamberi pechikamu chekutanga chete), uye tinogamuchira chinotevera chikamu kana changozara.
Dzimba dzekudzidzisa dzinowanikwa chero nguva.
Makamuri ekuchinja (nzvimbo yekugezera, makiyi, shangu) anowanikwawo.Ndokumbirawo ushandise uine yakawanda nguva.
Paunenge uchishandisa iyo yekudzidzira kamuri kana tafura tenesi, ndapota uyai zvemukati zvemitambo shangu.
Paunenge uchishandisa auto tenesi, ndapota huya netennis tenesi uye tenesi shangu (yekushandisa mukati).
Pane huru "yekudzidzira kamuri, auto tenesi, tafura tenesi zvakajairwa coupon".
Vashandi vachatsanangura mashandisiro emidziyo.
Elementary vadzidzi vechikoro uye vadiki havagone kuishandisa, asi auto tenesi uye tafura tenesi inogona chete kushandiswa mu5th uye 6th mamaki echikoro chepuraimari kana achiperekedzwa nemuchengeti.
Matikiti ekupaka haakwanise kupihwa.